डा. केसीको प्रश्न- ‘कति पैसा खाएर यस्तो निर्णय गरेको ?’ – जनस्वास्थ्य खबर
डा. केसीको प्रश्न- ‘कति पैसा खाएर यस्तो निर्णय गरेको ?’
काठमाडौं, २१ कार्तिक। शिक्षा मन्त्रालयले विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई यही शैक्षिक वर्षदेखि नै नयाँ भर्ना लिनेगरी सिट निर्धारण गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको मेडिकल काउन्सिलले आफैं अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गर्ने अधिकार छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निर्देशनमा काउन्सिललाई निर्देशन सहितको पत्राचार गरिएको हो । सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिवि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन बहानामा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
दीपक दाहाल/ नागरिक दैनिक बाट